Latest Voice News!
27. နေတိုးအုပ်စုဝင်နိုင်ငံငယ်များ လက်နက်ဝယ်ယူရေး ကူညီရန်အသင့်ဟု အမေရိကန်သမ္မတပြောကြား	-Voice
#Foreign Affairs	(1d ago)
နေတိုးစစ်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံငယ်လေးများ အမေရိကန်ထုတ်လက်နက်ဝယ်ယူ ရေးကူညီရန်အသင့်ရှိသည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောကြားသွားကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံများကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ရန် တွန်းအားပေးနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့သော ပြောကြားချက် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုနည်းပါးသည့် နေတိုးအုပ်စုဝင်နိုင်ငံအချို့ အမေရိကန်လက်နက်များ ဝယ်ယူလိုလျက်ရှိသည်ဟု နေတိုးညီလာခံတွင် ထရမ့်က ပြောကြားသွားသော်လည်း မည်သည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည်ကို နာမည်တပ် ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။
“လက်နက်ဝယ်နိုင်ဖို့ သူတို့ကို ငွေပေးမှာမဟုတ်ပေမယ့် ဝယ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးသွားမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကားက အကောင်းဆုံးဂျက်လေယာဉ်တွေ၊ အကောင်းဆုံးဒုံးကျည်တွေ၊ အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေ၊ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးတွေ၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေ ထုတ်လုပ်နေလို့ပါ” ဟု ထရမ့်က ပြောကြားသွားသည်။
ထို့အပြင် ဥရောပမဟာမိတ်များကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် ဝါရှင်တန်၏ အထောက်အပံ့ပေးမှုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟု နေတိုးညီလာခံတွင် သမ္မတထရမ့်က ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
‘အမေရိကန်လက်နက်များ ဝယ်ယူကြ’ ဆိုသည့် အစီအစဉ်ကို အိမ်ဖြူတော်က လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး လက်နက်ရောင်းချမှုဈေးကွက်တွင်း ဘီလီယံနှင့်ချီသည့် ငွေများဝင်ရောက်လာစေရေး လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ယင်းသို့သော လက်နက်ရောင်းချမှုနှင့် နေတိုးစစ်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံများ သတ်မှတ်ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်သုံးစွဲရေးကို ထရမ့်က တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း အမေရိကန်ထုတ်လက်နက်များ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကို သွယ်ဝိုက်ပြောကြားလျက်ရှိသည်။
“လူတိုင်းလူတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိရိယာတွေကို ဝယ်ယူလိုနေကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အဲဒီလိုနိုင်ငံအချို့ အကောင်းဆုံးကိရိယာတွေ ဝယ်ယူနိုင်ရေး ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးနေတာပါ”ဟု ထရမ့်က ပြောကြားသွားသည်။
လော့ဟိမာတင်၊ ဘိုးအင်း၊ နော့ရော့ဂရန်မန်စသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းများသည် အမေရိကန်လက်နက်ရောင်းချမှုမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သလို ဒုံးပျံများထုတ်လုပ်သည့် ရေဒီယွန်၊ စစ်သင်္ဘောများ တည်ဆောက်သည့် ဂျန်နရယ်ဒိုင်နမ်မစ်ကော်ပိုရေးရှင်းစသည်တို့လည်း အကျိုး အမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
26. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ ယခုနှစ်အတွင်းရေးဆွဲမည်	-Voice
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကို ယခုနှစ်တွင် စတင်ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သဘာဝဘေး)ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းရှိရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများနှင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်သူများ၊ ပြည်ပမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် HIV, TB, Malaria ကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများနှင့် ကာကွယ်ကုသမှုများပေးနိုင်ရန် အဆိုပါ မူဝါဒကို ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ထိုမူဝါဒတွင် နယ်စပ်ဒေသများ၊ စစ်ရှောင်စခန်းများမှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မူဝါဒရေးဆွဲပြီးစီးပါက စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါစောင့်ရှောက်မှုများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း International Organization for Migration-IOM နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသများ၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအရေးကိစ္စများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
25. အာဇာနည်နေ့မတိုင်ခင် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအင်အား ကြိုတင်ချထားမည်	-Voice
ဇူလိုင်၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်(၇၁) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားအတွက် ယင်းနေ့မတိုင်ခင် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲလုံခြုံရေးအင်အား အပြည့်ချကာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
ဇူလိုင်၁ ရက်နေ့က စတင်ကာ လုံခြုံရေးစီမံချက်ပါ အင်အား၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အာဇာနည်များ၏ အထိမ်းအမှတ်နေရာသုံးခုတွင် ချထားပြီး ဇူလိုင် ၁၂ ရက် နေ့တွင် ၅၀ရာခိုင်နှုန်းချထားခဲ့ကာ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က စတင်၍ လုံခြုံရေးအင်အားအပြည့်ချထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူးကြီးလှဝေက ပြောကြားသည်။
“လုံခြုံရေးအင်အားကတော့ ဘယ်လောက်ဆိုတာကို ပြောလို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဇူလိုင် ၁၆ မှာတော့ လုံခြုံရေးအင်အား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလုံးကို အဲဒီနေ့မှာချထားပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ရဲမှူးကြီးလှဝေက ပြောကြားသည်။
လုံခြုံရေးအင်အားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲများ၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းကာ အာဇာနည်များ၏ အထိမ်းအမှတ်နေရာသုံးခုတွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားအတွက် အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အပိုင်းခုနစ်ပိုင်းခွဲခြား၍ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
အာဇာနည်နေ့တွင် အာဇာနည်များ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက အာဇာနည်ကုန်းသို့ လာရောက်ဂါရ၀ပြုမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အတွင်းဝန်ရုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်စသည့် အထိမ်းအမှတ်နေရာများတွင်လည်း အများပြည်သူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
24. ညှို့အားပြင်းအမျိုးသမီးများကို အနီးကပ်ဆွဲရိုက်ပြခြင်းများ မပြုကြရန် ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီများကို ဖီဖာသတိပေး	-Voice
မော်စကို၊ ဇူလိုင် ၁၃
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(ဖီဖာ)သည် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်များကို ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသခွင့် ရရှိထားသော ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းစုများကို ပွဲကြည့်စင်ထက် ရှိ ညှို့အားပြင်းအမျိုးသမီးများကို အနီးကပ်ရိုက်ကူးပြသခြင်းမျိုး မပြုကြရန် သတိပေးတားမြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Daily Star က ဖော်ပြထားသည်။
ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းစုများသည် ဘောလုံးသမားများ၏ချစ်သူမိန်းကလေးနှင့် ဇနီးသည်များကို အနီးကပ် ရိုက်ကူးပြသခြင်း၊ ရုပ်ရည်ချောမောသည့် အမျိုးသမီးပရိသတ်များကို အနီးကပ်ဆွဲယူရိုက်ကူးတင်ဆက် ထုတ်လွှင့်ခြင်းများရှိနေသည့်အတွက် ဖီဖာက ယခုကဲ့သို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် တားမြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီများကမူ ၎င်းတို့အနေနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ပရိသတ်များ၏အပျော်ကို ရုပ်သံကြည့်သူများထံ မျှဝေပေးခြင်းသက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု ယခုတားမြစ်ချက်အပေါ် တုံ့ပြန် မှတ်ချက် ပေးအပ်ထားသည်။
ဖီဖာတာဝန်ရှိသူများသည် ၎င်းတို့အနေနှင့် ယခုတားမြစ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ရသည်မှာ ဘောလုံးအားကစားနည်းနှင့် လိင်အသားပေးဖော်ပြမှုဖြစ်စဉ်များ ရောယှက်မှုဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်၍ ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသွားခဲ့ပြီး လက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ကာလတွင် ရုပ်သံသတင်းတင်ဆက်သူ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်များကို လမ်းသွားလမ်းလာပရိသတ်များက လျှပ်တပြက် ဝင်ရောက်နမ်းရှုပ်သည့် အပြုအမူများမှာ ကောင်းမွန်သည့် လက္ခဏာများမဟုတ်ဟု ဖီဖာကွပ်ကဲရေးရုံး အကြီးအမှူး ဖီဒီရီကို အက်ဒ်ဒိုင်ချီက အသိပေးသွားခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း ရုရှားအသင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော ပွဲစဉ်များတွင် ရုရှားအသင်းကို လာရောက်အားပေးခဲ့သော မော်စကို အလှမယ်ဟောင်း အပြာဇာတ်ကားမင်းသမီး နာတယ်လ်ယာ နင်မ်ချီနိုဗာမှာ ရုပ်သံရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သူများ၏ ပစ်မှတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ် အစုအဖွဲ့လိုက်ကို ရိုက်ကူးပြသခြင်းကိုမူ ၎င်းတို့အနေနှင့် ခွင့်ပြုပါကြောင်းလည်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖီဖာက ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
23. ကုန်ကြမ်းရှားပါး၍ စက္ကူစက်ရုံများ ပိတ်သိမ်းဖွယ်ရှိဟုဆို	-Voice
#Business	(1d ago)
22. ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ တိုက်ခန်းများ ကြံ့ခိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်မည်	-Voice
ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ တိုက်ခန်းများ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ်၏ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်က ပြောကြားသည်။
ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အကြီးစား၊ အလတ်စား၊ အငယ်စားပြုပြင်ရန်ဟူ၍ သုံးမျိုးထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကတိုက်ခန်းများ၏ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်များပါဝင်သောအဖွဲ့ကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ယင်းအဖွဲ့သည် လက်ရှိနေထိုင်သူများထံမှ စစ်တမ်းကောက်ယူထားပြီး ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေအဆင့် သတ်မှတ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်ပြန်ပေးမည့် ရက်အတိအကျကို ပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်က ဆိုသည်။
အင်ဂျင်နီယာအသင်းကမူ ခိုင်ခံ့မှုအကြောင်းကို အစီရင်ခံစာတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အကြီးစားပြင်ဆင်ရမည့် တိုက်ခန်းများကို စက်ဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က စီစဉ်ထားသည်။
မျက်နှာကြက်အင်္ဂတေများကွာကျကာ နေထိုင်သူများ အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် တိုက်ခန်းများကို စစ်ဆေးပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံသို့ ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လတွင် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်ပြသည်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်က လူနေတိုက်ခန်း ၂၀ ပါသည့် အဆောက်အအုံကို မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့က ကြံ့ခိုင် မှုစစ်ဆေးပြီး လူနေထိုင်ရန် မသင့်ဟု ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။
ယင်းအဆောက်အအုံမှလွဲ၍ ကျန်သည့်တိုက်ခန်းများက မျက်နှာကြက် အင်္ဂတေကွာကျခြင်းများကို ကိုယ့်စရိတ်ဖြင့် ပြုပြင်နေရကြောင်း ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သူများထံမှ သိရသည်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်သည့်အတွက် သက်တမ်း ၁၉နှစ်သာ ရှိပြီး ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကဲ့သို့ RC အဆောက်အအုံများသည် လူနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မကြုံပါက သက်တမ်းနှစ် ၅၀ကျော်အထိ ကြံ့ခိုင်မှုရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
21. ခန္တီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ် စိုက်ထူခြင်းကို နာဂအဖွဲ့အစည်းများ ကန့်ကွက်	-Voice
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန္တီးမြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တု စိုက်ထူမည့်အစီအစဉ်ကို နာဂအဖွဲ့အစည်းများက ကန့်ကွက်ကြောင်း ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တုများ စိုက်ထူရေးကြိုးပမ်းချက်များသည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးသို့ ဦးမတည်ဘဲ ပိုမိုထိခိုက်စေမည့် အနေအထားသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ယင်းကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
“အင်အားရှိတယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်”ဟု နာဂအမျိုးသားရေးရာ ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအထောင်းမကူရီက ပြောကြားသည်။
ကြေညာချက်ကို နာဂအမျိုးသားရေးရာကောင်စီ၊ နာဂကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာ)တို့ အပါအဝင် နာဂအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၁၀ခု ၏ သဘောထားဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္တီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တု စိုက်ထူရန်အတွက် ယင်းအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် နာဂလူမျိုးတို့၏ သဘောထားကို ကျယ်ပြန့်စွာ တောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဆိုသည်။
“ကြေးရုပ်ကို ကော်မတီဖွဲ့ပြီး လုပ်တာပါ။ မြို့မိမြို့ဖတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေ ပါဝင်တဲ့ ကော်မတီဖြစ်သလို နာဂလူမျိုးအကြီးအကဲတွေလည်း ပါပါတယ်”ဟု ယင်း ကော်မတီပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ဆန်းမြင့်က ပြောသည်။
ခန္တီးမြို့တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်းလေးရာကျော်ကုန်ကျသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်စိုက်ထူမည့် အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ကြေးရုပ်တုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို လာမည့် ဇူလိုင်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
နာဂအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအပါအဝင်ဌာန ဆိုင်ရာများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း၊ ယခုကန့်ကွက်မှု မအောင်မြင်လျှင် အခြားနည်းဖြင့် ထပ်မံ ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နာဂ အမျိုးသားရေးရာကောင်စီထံမှ သိရသည်။
20. အဖမ်းအဆီးကြောင့် ထိုင်းရောက် မြန်မာ ငါးထောင်နီးပါး နေရပ်ပြန်	-Voice
19. အာဆီယံလမ်းခင်း ကိန်းညွှန်းတွင် မြန်မာနံပါတ် ၉ တွင်ရှိ	-Voice
#ASEAN ++	(1d ago)
ဘန်ကောက်၊ ဇွန် ၁၇
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ၏ ခင်းပြီးသားလမ်းကိန်းညွန်းထုတ်ပြန်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ နံပါတ် ၉ နေရာတွင်ရှိပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံက နံပါတ် ၁ နေရာတွင် ရှိနေသည်။
ခင်းထားသည့်လမ်းဆိုသည်မှာ လမ်းခင်းကျောက်၊ ကတ္တရာစေး၊ ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးတစ်ခုခုတို့ဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် လမ်းများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းလမ်းအမျိုးအစားသည် တိုင်းပြည်တွင်ရှိသည့် စုစုပေါင်းလမ်း၏ ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှထိရှိသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကိန်းညွှန်းကို InTouch Manufacturing Services’ Report & Nation Master က ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ကာ ရာနှုန်းပြည့်ဆိုပါက အဆိုပါနိုင်ငံတွင်းရှိ လမ်းအားလုံးသည် ခင်းပြီးသားလမ်းဖြစ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ လမ်းအားလုံးသည် ရာနှုန်းပြည့်လမ်းခင်းထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ကိန်းညွှန်းတွင် ပထမနေရာ ရရှိထားပြီး ယင်းနောက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဒုတိယနေရာ ရရှိထားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ခင်းပြီးသားလမ်း ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နောက်ဆုံးတွင်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နောက်ဆုံး၏ ရှေ့နံပါတ် ၉ နေရာတွင် ရှိနေသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၃၄,၄၇၆ ကီလိုမီတာရှိပြီး နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရှိသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည်သည် ၃၄၄၀ ကီလိုမီတာသာရှိသည်။
18. ထိုင်းဂူတွင်းမှ လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံမဲ့များကို ခြောက်လအတွင်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမည်ဟုဆို	-Voice
17. ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင် ဆက်တာဝန်ယူဖွယ်ရှိ	-Voice
နိုင်ငံ၏ငွေကြေးကဏ္ဍထိန်းကျောင်းရေးတွင် အရေးပါသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ၌ ဦးကျော်ကျော်မောင်ကို ဆက်လက်ခန့်ထားဖွယ်ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရသည်။
ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနေရာသည် ယခုလကုန်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကို ဦးကျော်ကျော်မောင်၏ နေရာတွင် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အစားထိုးဖွယ် မရှိသေးပေ။
ဦးကျော်ကျော်မောင်သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအပြောင်းအလဲရှိသည့်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားခြင်းမျိုးမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယခင်အစိုးရလက်ထက် ဘဏ္ဍာရေးဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
16. ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ကို မဲဆန္ဒရှင်အများစု မသိဟုဆို	-Voice
15. ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည်လက်ခံရေးစတင်နိုင်ရန် ကုလကျွမ်းကျင်အဖွဲ့များ ရခိုင်သို့ စေလွှတ်မည်	-Voice
14. အပစ်ရပ်စာချုပ်ပြင်မရပါက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရှေ့တိုးရန် မကောင်းဟု UWSA ဆို	-Voice
13. ဘတ်ဂျက်ကိုကြည့်ကာ စီမံကိန်းများကိုရွေးကြသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား	-Voice
#News	(2d ago)
စီမံကိန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်အခြေအနေကြည့်၍ ရွေးချယ်နေကြကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ငွေရေးကြေးရေးမှာ အရေးကြီးသော်လည်း အမှန်တကယ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ကိုရွေးရန် ပို၍အရေးကြီးပါကြောင်း သမ္မတအိမ်တော်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းက ယင်းသို့ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံမဖြစ်သေးသဖြင့် ပို၍အရေးကြီးကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွက် အများဆုံးအကျိုးဖြစ်စေမည့် ပြည်သူပြည်သားများဘ၀ မြှင့်တင်ရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမည့် စီမံကိန်းများကိုသာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းသည်။
အမျိုးသားစီမံကိန်းသည် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုတည်းအတွက်၊ ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွက်၊ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အမျိုးသားအားလုံးအတွက် စီမံကိန်းများဖြစ်ရန် အရေးကြီးကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံ၏ GDP ကို ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် က ပြောဆိုသည်။
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် အရှိန် အဟုန်ဖြင့် မတိုးတက်သော်လည်း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ကုန်ခန့်မှန်းခြေတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
လယ်ယာထွက်ကုန်များ ပြည်ပသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများသို့ စီးဝင်လာခြင်း၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ
တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကြောင့် ယင်းသို့ တိုးတက်လာခြင်းဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ တက်ရောက်ကြသည်။ 
12. မတ္တရာတွင် အသက်ခုနစ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး အဓမ္မကျင့်ခံရ	-Voice
11. ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်သစ်တွင် အစိုးရအသုံးစရိတ် ၂၄,၉၅၄ ဘီလီယံသုံးရန် လျာထား	-Voice
အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအသုံးစရိတ် ကျပ်ငွေ ၂၄,၉၅၈ ဘီလီယံသုံးစွဲရန်လျာထားကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားသည်။
နေပြည်တော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ရငွေစုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၂၀၀၅၁ ဘီလီယံ၊ သုံးငွေစုစုပေါင်း ကျပ်၂၄၉၅၄ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းဘက်ဂျက်လိုငွေ ၄၉၀၃ ဘီလီယံရှိမည်ဖြစ်၍ လိုငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုးသည် ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ရငွေ/သုံးငွေစုစုပေါင်းတွင် ပြည်ပအကူအညီ ကျပ် ၆၈၂ ဘီလီယံ၊ ပြည်ပချေးငွေ ကျပ် ၂၁၉၁ ဘီလီယံတို့ပါဝင်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ လိုငွေအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာငွေမှ ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၁၇၉၄ ဘီလီယံသည် သုံးငွေထဲတွင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်း ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေ စာရင်းနှင့် အဆိုပါငွေစာရင်းကို အခြေပြု၍ ရေးဆွဲသည့် ၂၀၁၈-၁၉ ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်မတိုင်မီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ 
10. ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လူငယ်များ စာပေဆွေးနွေးမည်	-Voice
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လူငယ်များ စာပေဆွေးနွေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
စာပေဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် သီးခြားစီကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလျှင် ကျောင်းသား ၁၀ ဦးနှင့် ကျောင်းသူ ၁၀ ဦးစီတက်ရောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“လုပ်မယ်လို့ လျာထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရက်မှာ လုပ်မယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော်လည်း မသိသေးဘူး။ အဲဒါက ပညာရေးဝန်ကြီးက ညွှန်ကြားလာမှပဲ ပြောလို့ရမယ်” ဟု ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကဆိုသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင်ပြုလုပ်မည့် စာပေစကားဝိုင်းများမှာမူ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတွေ့ဆုံကာ ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဆွေးနွေးမည့် စကားဝိုင်းဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို ဩဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန်လျာထားပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုလျှင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဦးစီ ရွေးချယ်ပေးပို့ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လ ဒုတိယအပတ်အတွင်း ညွှန်ကြားထားသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စာပေဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် ဗဟုသုတများတိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (YUSU) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဝင်းလွင်အောင်က ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စာပေဆွေးနွေးခွင့်ရရေး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအများစုပါဝင်နိုင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပြီးဆွေး နွေးပွဲတက်ရောက်မည့်သူများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်တွင် သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၌ စာပေဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်မည့်သူများ ရွေးချယ်ရာတွင် တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များက အမှတ်အများဆုံးကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနှစ်ဦးကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့သောကြောင့် ယင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်ခဲ့သေးသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း ခုနစ်ပွဲ ကျင်းပထားပြီးဖြစ်သည်။
9. ဆေးရုံတက်နေရသည့် ‘၀’ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ဇူလိုင် ၁၄ ဌာနေပြန်မည်	-Voice
8. အမေရိကန်က ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသည့်မြန်မာများကို ပြန်လက်ခံမည်	-Voice
ပြစ်မှုကျူးလွန်သဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးထားသည့် မြန်မာ ၃၀ ကျော်ကို ပြန်လည်လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်၍ ပြန်ပို့မည်ဆိုသူများအနက် ၁၆ ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံထားပြီးဖြစ်ပြီး ကျန် ၃၁ ဦးကို လည်း မကြာမီလက်ခံသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါဌာနမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လည်လက်ခံမည့်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား CI ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်တင်စိန်က ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဟုယူဆကာ အမေရိကန်အစိုးရက ပေးပို့သည့်အချက်အလက်များကို စိစစ်ကာ ပြန်လည်လက်ခံရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“သူတို့ပို့တဲ့သူတွေက အကုန်လုံးက မြန်မာနိုင်ငံသား ဟုတ် မဟုတ် စိစစ်ရသေးတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန် မြန်မာဘက်က လုပ်ဆောင်နေပြီး စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း အမေရိကန်အစိုးရက နှောင့်နှေးသည်ဟု ယူဆကာ အရေးယူမှု လုပ်ဆောင်လာကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် စိစစ်လက်ခံမည့် လုပ်ငန်းကို ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဦးကျော်တင်စိန်က ပြောဆိုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် ပြစ်ဒဏ်ချခံခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဌာနေပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြန်မာဘက်က နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသည်ဟုဆိုကာ အမေရိကန်အစိုးရက အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်လာသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်နှင့် အထက်ရှိသူများကို ဇူလိုင်လ ၉ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်အစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
7. မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်စီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်ရေး စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြလွှာ ခေါ်ယူမည်	-Voice
6. ကစားသမားဘ၀ကို ဂျူဗင်တပ်ထံတွင် စီရော်နယ်ဒို အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟု ဂျော့ခ်ျမန်ဒက်စ် ပြောကြား	-Voice
5. TheVoiceWeekly_14_22 and Supplement	-Voice
#The Voice Weekly Journal PDFs	(2d ago)
4. လိုပတ်အိုဘရာဒါနှင့် မက္ကစီကို ရွေးကောက်ပွဲ	-Voice
#Articles	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ အတိုကောက်အားဖြင့် AMLO ဟု လူသိများသည့် လိုပတ်အိုဘရာဒါ မက္ကစီကို သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရသွားပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၈ နှစ်ကြာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု၊ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အရေးနိမ့်မှု၊ ထောင်နှင့်ချီသည့် လူထုစုဝေးမှုများ၊ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၏ မြူနီစီပယ်နယ်မြေပေါင်း...
3. ရွှေအ ကြက်ကင်ရောင်းသည်	-Voice
#Articles	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဓားမကို ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်ကာ ခုတ်ထစ်နေရင်း ဈေးဝယ်သူများ တဖွဲဖွဲရောက်လာပြန်သည်။ ဝယ်သူများက “ဘယ်လောက်လဲ” ဟု မေးချိန်တွင်တော့ အခြားရောင်းသူများနှင့်မတူသော ပုံစံဖြင့် “အန်း အန်း” ဟု သူက ပြန်ဖြေလေသည်။ “အန်းအန်း”ဟု ဖြေရင်း သူရောင်းနေသော အစားအစာဘက်...
2. ရန်ကုန်သားတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ	-Voice
#Special Reports	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ပြည်လုံးကျွတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပပြီးနောက် ၂ နှစ်ကျော်အကြာ ရန်ကုန်မြို့တော်သူ မြို့တော်သားများအတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ခုနစ်သန်းနီးပါးနေထိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် လမ်းဘေးခွေးများ မျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကြွက်ဖမ်း၊ လမ်းခင်း၊...
1. ဦးကြီးတို့သောကအတွက် အပူငြိမ်းဆေး	-Voice
#Articles	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ တောင်သူတို့သောကကို ငြိမ်းအေးစေသည့်စနစ်က မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ်ကား လယ်ယာသီးနှံ အာမခံစနစ်ဖြစ်သည်။ မမျှော်မှန်းနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက သီးနှံအာမခံစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခြေခံနိုင်ငံဖြစ်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ အဆိုပါ...